Anambra Ga-Arụcha Ụlọ Ezumeezu Ogoogo Mba Ụwa n'Epùrè Ahọ Ọzọ — Obianọ
Previous Article Ọba Akwụkwọ Anambra Na SSDO Emerùbe Ụbọchị Nwata Nwaanyị Na Mba Ụwa
Next Article Mbize: Gọọmenti Etiti Ekwe Nkwà Ịgbatara Anambra Ọsọ Enyemaka
Igbo sị na ihe ji ọrụ bụ mmàlite na íké ọrụ, ma sịkwazie na ihe nara ọrụ bụ ọrụ. Ka ọ dị taa, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ ekwuola na a ga-arụcha ụlọ ezumeezu ogoogo mba ụwà ahụ a na-arụ n'Awka, n'ime ọnwa Epurè ahọ na-abịa abịa.
Gọvanọ Obianọ kwuputara nke a oge ọ bàgìdèrè na njem nleta a kaghị àkà n'ogige ọrụ ahụ iji mara ka ọrụ si aga n'ebe ahụ, bụkwa nke ọ nọrọ na ya wee gosìpụta afọ ojuju ya bànyere ka ya bụ ọrụ si agawanye n'ihu, nakwa ogoogo e ji arụ ya.
O mèrè ka a mara na ya bụ ụlọ ezumeezu ga-abàtanwu ọnụọgụgụ mmadụ ruru puku iri na ótù ma a rụchaa ya, ma sị na onye ji ya bụ ọrụ ngo kwùrù na a ga-arụcha ya n'ọnwa Maachị ahọ ọzọ, mana ya onwe ya na-atụkwàsakwu ótù ọnwa na ya iji hụ na a rụsìrì ya bụ ọrụ ike ma meekwa ka ọ kwụrụ chịm karịa ka a tụrụ anya.
Ka ọ na-ekwupụta na o nweghị ụlọ ọbụla na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị buru ibù ka nke ahụ gọọmenti steeti ahụ na-arụ; Gọvanọ Obianọ gakwara n'ihu kwuo na ya bụ nnukwu ụlọ ezumeezu ga-enye aka n'iweta mmepe na n'ịkwàlitèkwu ọnọdụ akụnụba steeti ahụ ma ọ bụrụ na a rụchaa ya, ma sịkwazie na ọrụ ga na-agawanye n'ihu ebe ahụ wee rukwaa oge a rụchàpụrụ ya bụ ulọ.
Na ntụnye nke ya, Kọmishọna na-ahụ maka ewumewu ụlọ steeti ahụ, bụ Maazị Mike Okonkwọ kwuru na yaụ bụ ụlọ nwère ọtụtụ ihe a ga-eji ya na-eme ma ọ bụrụ na a rụchaa ya, dịka ọgbakọ izugbe, azụmahịa, mmemme agbamakwụkwọ, tinyére ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma sịkwa na ọ ga-enye aka ime ka ịma mma nke Awka bụ isi obodo steeti ahụ cháwàpụtakwuo, bụrụ eji ama àtụ.
Ọ kọwara na ya bụ ọrụ bụ nke e ji ogoogo mba ụwa were arụ, ma mee ka a mara na ọ ga-enye aka ịdọta ndị njem nleghaghị anya na ya bụ steeti ma kewapụtakwara ụmụafọ steeti ahụ ọtụtụ òhèrè ọrụ, ọbụbadị dịka ọ kpọkùrù onye ji ya bụ ọrụ ngo ka kapịa ya bụ ọrụ ọnụ n'oge a tụrụ anya.
Ndị ọzọ sonyere na njem nleta ahụ gụnyèrè Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti ahụ, bụ Maazị Marcel Ifejiọfọr, na ògbò ya nke na-ahụ maka nkwàlitè ndị ntorobịa na nkewàpụta akụnụba ihe e ji aka emepụta, bụ Maazị Afam Mbanefo.